Dilal-wadareedkii ugu badnaa abid oo sanadkan ka dhacay Mareykanka - BBC News Somali
Dilal-wadareedkii ugu badnaa abid oo sanadkan ka dhacay Mareykanka
Image caption Bulshada ayaa aad uga damqata dil-wadareedyadan, sida kii ka dhacay El Paso bishii August
Mareykanka waxaa sanadkan 2019 ka dhacay dil-wadareedyadii ugu badnaa abid, sida ay sheegeen baarayaal.
Xog ururin ay sameeyeen wakaaladda Associated Press (AP), USA Today iyo Jaamacadda Northeastern ayaa lagu diwaan geliyay 41 dhacdo oo ay ku dhinteen 211 qof.
Dil-wadareedku waa marka afar qof ama ka badan lagu dilo hal dhacdo, marka laga reebo qofka dhibka geystay.
Dhacdooyinkii dhiigga badan uu ku daatay sanadkii 2019 waxaa ka mid ahaa tii ay ku dhinteen 12 qof oo ka dhacday Xeebta Virginia bishii May iyo 22 qof oo bishii August lagu dilay El Paso.
Kiisaska 41-ka ah ee dhacay sanadkan 2019, 33 ka mid ah waxaa loo adeegsaday qoryo, sida ay sheegeen baarayaasha. Marka gobol ahaan la eego, dilalkii ugu badnaa ayaa ka dhacay California.
Baarayaasha ayaa tan iyo sanadkii 2006 ururinayay xogta dil-wadareedyada Mareykanka, Sanadkii labaad ee ay dilalka ugu badan ka dhaceen Mareykanka wuxuu ahaa 2006, oo ay dhinteen 38 qof.
Inkastoo 2019 ay Mareykanka ka dhaceen dhacyooinkii ugu badnaa, haddana khasaaraha dhimashada ee 211 waxaa dbaoolay 224 qof oo dil-wadareed ku dhintay sanadkii 2017. Sanadkaas wuxuu ahaa kii ugu xumaa ee dil-wadareed uu dhiig badan ku daato uu ka dhaco Mareykanka, 59 qof ayaa hal maalin ku dhintay toogasho ak dhacday xaflad ka socotay Las Vegas.
Dil-wadareedyo badan oo ka dhaca Mareykanka aad looma baahiyo, sababo la xiriira inay ku lug leeyihiin khilaaf dhex maray qoysas iyo ka ganacsiga daroogada, sida ay baarayaashu sheegeen.
Waa kuma ninkii dadka badan ku laayay Las Vegas?
Booliska oo baaraya 'dilaaga' Las Vegas waxa ku dhaliyay weerarka
Maxaan fal argagixiso loogu tilmaamin toogashadii Las Vegas?
Tirada dilal-wadareedyada ka dhacay Mareykanka ayaa kor u kacday, inkastoo ay hoos u dhaceen dilalka guryaha ka dhaca, sida uu sheegay James Densley,oo ah baare dembiyada ah waxna ka dhiga Jaamacadda Metropolitan State University ee gobolka Minnesota.
Xaqa lahaanshaha hubka ayaa mar kale lagu daray isbeddelkii labaad ee lagu sameeyay dastuurka Mareykanka, sare u kaca dilalka ayaanan wax badan ku cadaadin xildhibaannada Mareykanka inay isbeddel ku sameeyaan xakameynta hubka.
Bishii August, kaddib weerarradii ka dhacay Dayton, Ohio, iyo El Paso, Texas, Madaxweyne Donald Trump ayaa yiri "wada xaajoodyo dhab ah" ayay hoggaamiyeyaasha congress-ku ka yeelan doonaan hubinta iyo baaritaanka dadka hubka haysta.
Doodda ku saabsan xakamaynta hubka Mareykanka oo wali socota
Jaantus muujineysa isticmaalka hubka ee shacabka Mareykanka
Muddaharaadyo ka dhan ah isticmaalka hubka oo ka dhacay Mareykanka
Balse Mr Trump ayaa ka gaabsaday arrintaas, kaddib markii sida la sheegay in telefoonka in cabbaar ah kula hadlay Wayne LaPierre, oo ah madaxa ururka dadka hubeysan ee Mareykanka - oo ah urur awood badan oo ka soo horjeeda tallaabooyinka lagu xakameynayo hubka.
Mar uu wicitaankaasi kaddib weriyeyaasha la hadlayay, ayuu madaxweynuhu sheegay in Mareykanka uu haatan leeyahay "hannaan adag oo lagu hubinayo dadka haysta hubka", isagoo intaas ku daray in dil-wadareedki uu yahay "dhibaato maskaxeed".
Image caption Baroordiiq lagu xusuusanayo dadkii ku dhintay dil-wadareedkii Las Vegas
Dimuqraaddiyiinta ayaa ku baaqay in la qaado tallaabooyin adag oo xakameynta hubka ah.
Horraantii bishan, ninka u hanqal-taagaya madaxtinnimada Mareykanka horena u ahaa madaxweyne ku xigeenkii dalkaas Joe Biden ayaa sanad-guuradii toddobaad ee toogashadii ka dhacday iskuulka Sandy Hook u adeegsaday soo cusbooneysiin baaqa xakameynta hubka. Qorshaha Mr Biden waxaa ku jira mamnuucidda soo saarka iyo iibinta hubka dhibaatooyinka lagu geysto iyo in baaritaan adag lagu sameeyo dhammaan iibka hubka.
Haweeneyda iyadana dimuqraaddiga ka tirsan una tartameysa madaxtinnimada Mareykanka, Elizabeth Warren, ayaa horraantii sanadkan shaacisay qorshaheeda ku aaddan xakameynta dilalka hubka loo adeegsado 80%. Ms Warren ayaa ku baaqay in baaritaan adag la sameeyo, isla markaana laysinka hubka lagala laabto ceddii sharciga jebisa.